Wasiirka Maalliyadda oo la kulmay Wakiilo ka socda Xawaaladaha(Sawirro) – Radio Muqdisho
Wasiirka Wasaarada Maaliyada ee xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan “Fargeeti” oo la hadlay Radio muqdisho isagoo ku sugan dalka Isutagga Imaaraad Carabta ayaa sheegay in uu xubno ka socda xawaaladaha Soomalida uu kulan la yeeshay isla markaana ay ka wada hadleen xal u helidda dhibaatada ka soo dersitay xawaaladaha.
Mudane Maxamed Aadan “Fargeeti” Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in go’aanka dowladda Kenya ay ku joojisay shaqada Xawaaladaha Soomaalida ay dhibaato weyn u keentay dadka Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in laga tashado sidii laga yeeli lahaa dhibaatadaasi.
“ go’aanka u dambeeyay anaga oo dhan iyo xawaaladaha laga yaabee in go’aanka Kenya uu noqoday mid lama filaan ah maadaama aysan jirin wax digniin ah oo ka horeeyay oo lagu joojiyay Koontooyinka iyo Xawaaladaha dowladda Kenya ayaa kala hadlaynaa sababta arintan ka dambeysa iyadoo wax daliil ah aysan jriin” ayuu yiri Mudane Fargeeti.
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Ibraahim “Fargeeti” ayaa sidoo kale sheegay in kulanka ay wada yeesheen wakiilada Xawaaladaha Soomaaliya ay u soo jeediyeen in sameeyo urur ay ku midaysan yihiin dhamaan Xawaaladaha Soomaaliya isla markaana dowlada Soomaaliya ay ganacsatada Soomaaliyeed ay yeeshaan xiriir dhow oo ku aadan xalinta arintan.
Muungaab: Waa in la is weydiiyo Sababta loo Qarxinayo Muqdisho"SAWIRRO"